Himalaya Dainik » यात्रा गर्दा सिटमा सुन्दर युवती बस्न आईन् भने मक्ख नपरौँ, ती चोरपनि हुन सक्छन् !
यात्रा गर्दा सिटमा सुन्दर युवती बस्न आईन् भने मक्ख नपरौँ, ती चोरपनि हुन सक्छन् !
सार्वजनिक बसमा यात्रा गर्दा संगै सिटमा सुन्दर युवती बस्न आइन् भने मख्ख पर्ने युवकहरुको लर्को लामै हुन्छ । तर
यसरी मख्ख पर्नुभन्दापनि होसियार बन्नुपर्ने समय आएको छ ।
काठमाडौंमा प्रहरीले गरेको विशेष सर्च अभियानमा सुन्दर युवती ग्याङ्ग बनाएर पाकेटमारमा संलग्न भएको खुलेको छ । । काठमाण्डौमा पाकेटमारमा संलग्न भएका युवतीसहित ७७ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
प्रहरीले एउटै ग्याङ्गमा सहभागी त्यस्ता चार युवतीलाई पनि पक्राउ गरेको छ । प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार युवतीहरुले ग्याङ नै बनाएर लुट्दै आएका थिए। नियन्त्रणमा लिइएका चारै जना एउटै समूहका रहेको प्रहरीको दावी छ। उनीहरू चाबहिल, नयाँ बसपार्क, गौशाला लगायतका क्षेत्रमा चल्ने सार्वजनिक सवारी, पसल र भिडभाडमा सक्रिय हुने गरेको प्रहरीको भनाई छ ।
प्रहरीलाई उनीहरुले दिएको बयानमा पकेट मार्नु ‘वाध्यता भनेका छन्। आठ र नौं कक्षासम्म पढेपछि काठमाडौँ आएका उनीहरूले राम्रो काम नपाउँदा यो पकेटमारीमा लागेको देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीलाई दिएको बयानमा उनीहरूले भनेका छन्,’राम्रो काम पाइएन। काठमाडौँमा बाच्न सबैभन्दा राम्रो काम ठगी नै हो भनेर लागियो।’
उनीहरूले दैनिक १० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म चोरी तथा पकेटमार गर्ने गरेको बताएका छन्। ‘
चोरीमा शङ्का नहोस् भनेर उनीहरू चिटिक्क परेको कपडा र सुहाउँदो मेकअपमा सक्रिय हुने गरेका थिए। अझै बच्चा समेत बोकेर पकेट मार्ने गरेको समेत पाईएको छ । त्यसैले राम्री युवती देख्दैमा बुझ्दै नबुझी चाँडै नजिक नहुन समेत प्रहरीले सचेत गराएको छ।